1954-1964 Evinrude ဂျွန်ဆင် 5.5 HP က Carburetor Tune-Up ကို | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
1954-1964 Evinrude ဂျွန်ဆင် 5.5 HP က Carburetor Tune-Up ကို
အချိန်မရွေးသင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့အလှည့်ပတ်ထိုင်ဟောင်းမော်တာရှိသည်, သင် carburetor ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဆီနှင့်ရောအထူးသဖြင့်လာသောအခါသဘာဝဓာတ်ငွေ့, အရောင်တင်ဆီမှဖွင့်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သွားဖုံးဖွင့်သင့်ရဲ့ carburetor နှင့် gaskets မှာအဝေးစားလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏လောင်စာဆီတိုင်ကီထဲမှာထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ် carburetor သို့တိုက်ရိုက်လေပေါ်မှာပနိုငျကွောငျးအများအပြား carburetor သန့်ရှင်းရေးသည်ရှိပါတယ်နေစဉ်, သူတို့တစ်တွေ carburetor ညှိတက်ကဲ့သို့တူညီသောအရာပြီးမြောက်ဖို့နီးကပ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ယင်းမော်တာအဆိုပါ carburetor အတွက်လောင်စာမရှိဘဲသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်တောင်မှလျှင်, gaskets ထွက်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့် crack သို့မဟုတ်လျင်မြန်စွာသင်သည်နောက်တဖန်အသုံးပြုရန်ဖို့ကြိုးစားတခါဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ သေချာ carburetor ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သွားလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း, ဖယ်ရှားရန် disassemble, စင်ကြယ်သောသစ် carburetor ကိရိယာအစုံအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူစုဝေးအစားထိုးနှင့်ချိန်ညှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတစ် carburetor ညှိတက်ဖျော်ဖြေဖို့ခြေလှမ်းများဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ carburetor ကစက်နှိုးများအတွက်လောင်ကျွမ်းခြင်းအခန်းထဲကဝင်သောမတိုင်မီစနစ်တကျလေကြောင်းနှင့်လောင်စာပေါင်းဘော်ရောနှောသော, ရိုးရှင်းစျေးပေါ, နှင့်အချိန်သက်သေပြကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမော်တာများအတွက် carburetor အများအပြားပဲ့ချိတ်စက်နှင့်ပင်မြက်ခင်း-Boy lawnmowers ပေါ်တွင်အသုံးပြုကြောင်းတူညီသော carburetor ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဒါကြောင့်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်စနစ်တကျအလုပ်ဧရိယာရှိသည်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ချွတ်ချင်ကြပါဘူးပေးသောအများကြီးသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းရှိတယ်။
အဆိုပါ carburetor ဓာတ်ငွေ့အကြံပေးအဖွဲ့နှင့်လောင်စာလိုင်းမှာစတင်သည်သောခြုံငုံလောင်စာဆီစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအ 50 ရဲ့ခေတ်မော်တာတို့နှင့်အတူကြွသောအကြံပေးအဖွဲ့ dual-line ကိုဖိအားင့်ကားများဖြစ်ကြသည်။ OMC နောက်ဆုံးမှာဝေး 60 ရဲ့ဖိအားင့်ကားများသုံးပြီးထံမှလေတစ်ခုတည်းလိုင်းစုတ်ယူခြင်းင့်ကားများထံသို့သွားလေ၏။ ငါ၏အတင့်ကားများနှင့်လောင်စာလိုင်းများ၏အခြေအနေအားပေး, ငါအကြောင်းကို $ 22.00 များအတွက် On-line ကိုဝယ်သော Mikuni လေဟာနယ်လောင်စာဆီစုပ်စက်, ဖြည့်စွက်, နှင့်တစ်ခုတည်းဖို့လောင်စာလိုင်း connector ကိုထွက်ဖလှယ်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုခေတ်မီတစ်ခုတည်းလိုင်းအကြံပေးအဖွဲ့မှပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ် လိုင်းအမျိုးအစား။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ငါ၏အအဆင့်မြှင့်၏ဖော်ပြချက်များနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်အသစ်များင့်ကားများ project.to ။ သင်သည်သင်၏မော်တော်ပေါ်မူရင်းအရာအားလုံးစောင့်ရှောက်ခြင်းအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်လျှင်, သင့်ရဲ့ဖိအားင့်ကားများများအတွက်လိုင်းများ, connectors နှင့်ဖျံအစားထိုးမရရှိနိုင်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်။
အဆိုပါ carburetor ပန်းကန်၏အောက်ဆုံးမှပူးတွဲပါကဤမော်တာများအတွက်လောင်စာ filter ကိုရှိပါတယ်။ ဤသည် filter ကိုထောင်ချောက်ရေနှင့်အနည်အနှစ်များရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့ဖန်ခွက်ပန်းကန်များနှင့်အခြိနျမှနျမှသန့်ရှင်းရေးအတှကျဖယ်ရှားရမည်။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့လောင်စာကန်သန့်ရှင်းအရောင်တင်ဆီ, သံချေး, ဒါမှမဟုတ်ဟောင်းနွမ်းလောင်စာဆီအခမဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်ချင်တယ်။ ဒါဟာအသုံးမပြုတဲ့လောင်စာစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်လတ်ဆတ်သောလောင်စာဆီနှင့်အတူအသီးအသီးရာသီထွက်စတင်ရန်ကောင်းတစ်ဦးအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့သင်မဝယ်သောဓာတ်ဆီနီးပါးနေသမျှကာလပတ်လုံးကနှစ်ပေါင်းအတိတ်တွင်ပြုသကဲ့သို့သိုလှောင်မထားဘူး။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ထိုအလောင်စာအစိုဓာတ်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့လေ့နှင့်သင်သည်သင်၏လောင်စာအတွက်ရေအတူတက်လေအဖြစ်ဒါ့အပြင်အထဲတွင်အရက်သို့မဟုတ်အီသနောနှင့်အတူကွယ်ပျောက်ဓာတ်ဆီနေ။ ကားများပုံမှန်အားအပတ်တိုင်းသို့မဟုတ်ဒါလောင်စာတစ်တိုင်ကီတက်ရှို့ဒါပေမယ့်လှေ, မှန်မှန်အသုံးမပါလျှင်လောင်စာမကောင်းတဲ့ go ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလူတွေကိုသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာအဟောင်းကြောင်းလောင်စာအပေါ်သူတို့ရဲ့မော်တာ run နိုင်ပါတယ်ထင်မည်မျှအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။
ဒီမော်တာများအတွက်လောင်စာ / ရေနံအရောအနှော 24 ဖြစ်ပါသည်: 1 ။ ဒါက 16-ဂါလံအကြံပေးအဖွဲ့များအတွက်3ကထုတ်တဲ့ unleaded ဓာတ်ဆီသို့မဟုတ်2အောင်စတစ် 3-ဂါလံအကြံပေးအဖွဲ့များအတွက် TCW-87 rated 32 သံသရာဆီ5အောင်စဖြစ်ထဲကအလုပ်ဖြစ်တယ် ..2သံသရာမော်တာရေနံနှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ရရှိနိုင်ပါကလက်ရှိအကောင်းဆုံး2သံသရာရေနံယနေ့ TCW-3 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ TCW-2 နှင့်အထက်ဗားရှင်းကဲ့သို့သောအရာဖြစ်၏ပေမယ့်ပိုသစ်ရေနံအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်ကိုသင်အသက်ကြီးအဆီများနှင့်အတူထက်ပိုကောင်းတဲ့ချောဆီအရည်ကြည်များနှင့်လျော့နည်းကာဗွန် buildup ရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။ စံ 16 အလေးချိန်မော်တာရေနံဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဓာတ်ဆီ၏ 1 အချိုးသင်မူကားတွေအများကြီးထိုကာလကတည်းကပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာကိုသတိရရမယ်: ဤအဟောင်းများကိုမော်တာများအတွက်မူရင်းရောစပ်ညွှန်ကြားချက်တစ် 30 အကြောင်းပြောဆို။ TCW-3 ဒီနေ့သင်မဝယ်နိုင်တော်တော်များများမဆို2သံသရာရေနံအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့ပတ်လည်ထိုင်လျက်အချို့အဟောင်း TCW-2 ရေနံရှိပါကရှေ့ဆက်သွားနှင့်ပျောက်သည်အထိအပြည့်အဝသည်အခြားအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်အတူဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုကိုသုံးပါ။ ဒါ့အပြင်အဘယ်သူမျှမအားသာချက်ဒါလျော့နည်းစျေးကြီး 87 ကထုတ်တဲ့ unleaded ဓာတ်ဆီနှင့်အတူကပ်နှင့်သင့်မော်တာပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်မြင့်မားကထုတ်တဲ့ခဲလောင်စာကို အသုံးပြု. လည်းမရှိ။ ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်2ရေနံအရောအနှောသို့သော်ဤအကြောင်းမှာဝက်ဝံအမျိုးအစားကိုသင့်ရဲ့မော်တာအတွက်လုံလောက်သောရေနံမဟုတ်ပါဘူး: ပိုသစ်သော 50 သံသရာမော်တာတစ် 1 ကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်ဦး 24 ထက်လျော့နည်းဘာမှမသုံးပါနဲ့: 1 အရောအနှောသို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏မော်တာကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ carburetor တစ်ခု Atom အရောအနှောသို့လေကြောင်းနှင့်လောင်စာများ၏မှန်ကန်သောအချိုးအစားပေါင်းဘော်ရောနှော။ ယင်းဆလင်ဒါသို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းလောင်စာ / လေထုအရောအနှောပမာဏကိုအမြန်နှုန်းနှင့်အာဏာဆုံးဖြတ်သည်။ အဆိုပါလောင်စာဆီများနှင့်လေကြောင်းလေ့တစ်စည်ကိုခေါ်, အ venturi အတွက်ရောထွေးဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ carburetor တစ်ဦးတည်းသာစည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ venturi ရိုးရိုးအင်ဂျင်သို့စို့ခံနေရကြောင်းလေကြောင်းရှောက်သွားရကြမည်ဖြစ်သောမှတဆင့် carburetor အတွက်ဂရုတစိုက်သုံးနိုင်ကန့်သတ်သည်။ လေဒီကန့်သတ်ဖြတ်သန်းအဖြစ်ကတစ်ဦးအခိုးအငွေ့သို့လှည့်ရှိရာ venturi အတွင်းမှလောင်စာဖြန့်ချိမယ့်ဂျက်မှတဆင့်လောင်စာကိုစို့ဖို့အောက်ပိုင်းဖိအားဖြစ်ပေါ်စေတက်အမြန်နှုန်း။ အဆိုပါဂျက်လေယာဉ်ဟာ carburetor ပန်းကန်ထဲမှာလောင်စာဆီသေးငယ်တဲ့ရေလှောင်ကန်များပါဝင်သည်သော carburetor ပန်းကန်ထဲကနေက၎င်း၏လောင်စာထားပါတယ်။ အဆိုပါ carburetor ပန်းကန်ထဲမှာလောင်စာဆီပမာဏကိုလောင်စာအပြည့်အဝပန်းကန်လုံးစောင့်ရှောက်သောနှုန်းရှင်မျှောခြင်းနှင့် float အဆို့ရှင်စည်းဝေးပွဲကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ တစ်ဦးကအမြင့်အနိမ့်မြန်နှုန်းအပ်ဆို့ရှင်အသေးကန့်သတ်အတွင်းလေထုလောင်စာများ၏အချိုးကိုထိန်းညှိ။ အဆိုပါ carburetor စည်ဝင်ရောက်လေကြောင်း၏အသံအတိုးအကျယ်ဟာအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာလီဗာအားဖြင့်ပွင့်လင်းလိမ်သောလိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဤသည် carburetor လည်းနင်စေရှိပါတယ်။ သင်မော်တာ၏ရှေ့ပေါ်နင်စေ button ကိုဆွဲထုတ်သောအခါ, venturi ၏အထက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးတစ်စက္ကန့်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်တစ်ဦးချမ်းအေးမော်တာစတင်ရန်လိုအပ်သောလေထုအရောအနှောဖို့ပိုမိုမြင့်မားလောင်စာဖြစ်စေတဲ့ပိတ်ထားသည်။ သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့မော်တာစတင်ရန်တဲ့အခါမှာ, သင်နင်စေဖုဆွဲအားဖြင့်နင်စေပိတ်လိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ carburetor ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအဖြစ်မော်တာ "ပေါ်လာ" သို့မဟုတ် "sputters" ပြီးတာနဲ့သင်ကနင်စေပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဂျွန်ဆင် Seahorse 5.5 Carburetor ကြည့်ရန်ပေါက်ကွဲ
Carb Kit Napa အပိုင်းနံပါတ် 18-7043 သို့မဟုတ် OMC အပိုင်းနံပါတ် 382047, 3832049, 383062, 383067, ဒါမှမဟုတ် 398532 များအတွက်အစားထိုး
ငါသည်ဤကိရိယာအစုံကတော့ float မပါဝင်ခဲ့ပါ, $ 15.49 ပေးဆောင်။ လိုအပ်လျှင်သင်နှင့် ပတ်သက်. $ 3.00 များအတွက်သီးခြားကမဝယ်နိုင်
Carburetor Tune-Up ကို Kit
Carb Kit OMC အပိုင်းနံပါတ် 382045 သို့မဟုတ် 382046 Napa / Sierra အပိုင်းနံပါတ် 18-7043
ရှေ့ Panel ကိုနှင့် Air တိတ်ဆိတ် Remove
အဆိုပါသီး Button ကိုဖိထားပြီးသော screw နှစ်ခု Remove, အနှေးနှင့် high-speed ထိန်းချုပ်ရေး knobs, နှင့်ရှေ့ဆက်နဲ့ပိတ် panel ကိုလျှော။
Carburetor တပ်ဦး Pannel
ထိန်းချုပ်ရေး knobs Remove
တပ်ဦး Pannel ဖယ်ရှားပြီး
အနှေးအမြန် Pack Nut Remove
အနှေးအမြန် Pack Nut
လေငြိမ်ဝပ်စွာနေအပေါ်ကိုကိုင်ပြီး4screw နှစ်ခု Remove ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်ကွာဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်လေထုငြိမ်ဝပ်စွာနေဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
Air ကိုတိတ်ဆိတ်ဝက်အူ Remove
Air ကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့် Remove
ယင်းအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာချိတ်ဆက်ဖယ်ရှားပါ။ reassembly များအတွက်ရည်ညွှန်းအဖြစ်အောက်ကပုံထဲကသုံးပါ။ ရုံအလုံအလောက်အဆိုပါချိတ်ဆက်ချွတ်ချော်ခွင့်ပြုပါရန် screw နှစ်ခုဝက်အူဖြုတ်။
အချိန်ကိုက်ကြိုတင်လီဗာများအတွက်ထိန်းသိမ်းထားကလစ်ဖယ်ရှားပါ။ ဒီကလစ်ချွတ်ဖို့မသတိထားပါ။ ညာဘက်အချိန်ကိုက်ကြိုတင်လီဗာတွန်းများနှင့်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
တစ်ဦး7/ 16 လိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်တကွ, စားသုံးမှုထူးထူးအပြားပြားဖို့ carburetor ခန္ဓာကိုယ်ကိုင်ကြောင်းနှစ်ခုအခွံမာသီးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
သင်ရွေးချယ်ထားလျှင်သင့်ရဲ့ carburetor ယင်းမော်တာကိုချွတ်နေစဉ်, သင်ကလောင်စာဆီစုပ်စက်နှင့်စုတ်ယူခြင်းအကြံပေးအဖွဲ့မှ upgrade နိုင်ပါတယ်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီအဆင့်မြှင့်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြည့်ဖို့။
အဆိုပါ Carburetor Filter ကို Disassemble
ဤသည် carburetor အဆိုပါ carburetor ၏အောက်ခြေပေါ်မှာဖန်ခွက်လောင်စာ filter ကိုရှိပါတယ်။ ဖန်ခွက်ပန်းကန်ဖယ်ရှားပါ။ ငယ် "sprocket" ခွံမာသီးဝက်အူဖြုတ်နှင့် filter ကိုဆလင်ဒါထဲကအလျှော။ ယင်းပတ်ပတ်လည်ရော်ဘာ gasket ဖယ်ရှားပါ။ ဒါဟာသမျှသောဤအပိုငျး clean ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ရော်ဘာပျော်စခွေငျးငှါဖြစ်သောကြောင့်ဆိုရော်ဘာ gaskets အပေါ် carburetor သန့်စင်ကိုလေပေါ်မှာမထားပါနဲ့။ ဤသည် gasket ဖန်ခွက်ပန်းကန်နှင့်အတူတစ်ဦးလေကြောင်းတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်အရေးကြီးပါသည်။
အဆိုပါ Carburetor Disassemble
အဆိုပါ carburetor ၏အရှေ့ဘက်ကနေအမြင့်ဆုံးနှင့်နှေးကွေးသောအမြန်နှုန်းဂျက်ဝက်အူဖြုတ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အဟောင်းထုပ်ပိုးအဝတ်လျှော်ဖယ်ရှားပါ။ ထို့နောက်သင်သည်သင်၏ reassembly ပြုပါဤအဟောင်းထုပ်ပိုးအဝတ်လျှော်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အခြို့သောအလုပျယူစေခြင်းငှါသင်တို့မူကားသစ်ကိုထုပ်ပိုးအဝတ်လျှော်နှင့်အတူဤအစားထိုးလိမ့်မည်။
high-speed ဂျက် Remove
အတူတကွ carburetor ကိုယ်ခန္ဓာ၏အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းရှက်ကိုင်သော screw နှစ်ခုဖယ်ရှားပါ။ ဆိတ်ကွယ်ရာရှက် Pull ။ အဲဒီနှစျခုရှက်ကြားရှိ gasket အဆိုပါ carb ကိရိယာအစုံကနေအသစ်တခု gasket ဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်။
ဤသည် carburetor တစ်ခုမူရင်းဖော့ဆို့ float ရှိပါတယ်။ ကတော့ float ဆိုးရွားခြင်းနှင့်အရောင်တင်ဆီအတူတက် junked ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဤသည် carburetor, ဖြိုချသန့်စင်, သစ် carb ကိရိယာအစုံအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးခံစရာမလိုဘဲကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။
Carburetor Float Remove
Carburetor Bowl Gasket Remove
ကတော့ float ပတ္တာ pin ကိုဖယ်ရှားပါ။ ဒါဟာ pin ကိုပု carb ကိရိယာအစုံကနေအသစ်တခု pin ကိုဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်။ ကတော့ float, float နှင့်အဆို့ရှင်စည်းဝေးပွဲကိုဖယ်ရှားပါ။ သင်က carburetor ညှိတက်ကိရိယာအစုံကနေအသစ်တခုကတော့ float အဆို့ရှင်စည်းဝေးပွဲကိုအတူ reassembling လိမ့်မည်။
Float Pin Remove
Float Valve Remove
Float Valve ညီလာခံ Remove
high-မြန်နှုန်း nozzle ဖယ်ရှားပါ။ အဆိုပါ carburetor ၏ထိပ်မှအလှည့်လည်လူမီနီယံ plug ကိုဖယ်ရှားပါ။ ဤသည်အများဆုံးအလွယ်တကူဗဟိုအတွက်သေးငယ်တဲ့အပေါက်တူးထို့နောက်လူမီနီယံ plug ကိုထွက် pry ဖို့စာရွက်သတ္တုဝက်အူထဲမှာ screwing ခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ carburetor ညှိတက်ကိရိယာအစုံအတွက်အသစ်တခု plug ကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါ plug ကိုနောက်ကွယ်ကဧရိယာထွက် clean ။ စင်ကြယ်သောပြီးတာနဲ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေတဲ့ဝက်အူလှည့လက်ကိုင်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့သံတူနှင့်အတူအရပ်သို့နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် plug ကိုအစားထိုးရန်။ ဒါဟာလေကြောင်းပေါက်ကြားတားဆီးဖို့လူမီနီယံ plug ကို၏အနားပတ်လည်မှာဆီလီကွန်၏ရုပ်ရှင်နေရာကိုသွားမယ့်ကောင်းတယ်။
high-speed nozzle Remove
လူမီနီယမ် Plug Remove
Plug Remove မှဝက်အူကိုသုံးပါ
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဆိုပါ carburetor အစိတ်အပိုင်းများကိုရှင်းလင်း။
carburetor သန့်စင်နှင့်အတူအားလုံးသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုဆင်းကိုလေပေါ်မှာပ။ သင်တစ်ဦးကော်ဖီလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်နေ့ချင်းညချင်းဤအစိတျအပိုငျးစိမ်ချင်ပေမည်။ နှိမ့်ချ Wipe နှင့်ချုံ့လေနှင့်အတူအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများချွတ်မှုတ်။ အားလုံးကျမ်းပိုဒ်ထွက်မှုတ်နှင့်မျှမတို့ပိတ်ဆို့ခြင်းလည်းမရှိသေချာပါစေ။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏အတော်များများကအတော်လေးသေးငယ်ဖြစ်ကြပြီးအလွယ်တကူဖောက်မှုန်ပိတ်ဆို့။ ပြောင်လက်တောက်ပသောနေရောင်ခြည်အတွက် carburetor ခန္ဓာကိုယ် Hold များနှင့်နီးကပ်စွာစစ်ဆေးခြင်း။
အဆိုပါ Carburetor Reassemble
အခြေခံအားဖြင့်, carburetor reassembling disassembly ၏ခြေလှမ်းများကတဆင့်ပေမယ့်ပြောင်းပြန်သွားကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သင်ပင် disassembly နှင့်စည်းဝေးပွဲကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသုံးပြုတူညီတဲ့ပုံတချို့ထင်ရပေမည်။ သင်ကအတူတူပြန်ထားပြီးနောက်သင့်ရဲ့ carburetor ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဂရုစိုက်နိုင်ရန်အတွက်တန်ဖိုးထားဖို့လိုအပျကွောငျး carburetors အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိပါသည်။ သင်သည်သင်၏ carburetor ညှိတက်ကိရိယာအစုံကနေအသစ်အစိတျအပိုငျးမြားနှငျ့ reassemble ချင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်နောက်ဖုန်မှုန့်, သဲ, bits သည်နှင့် gasket ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့လမ်းကြောင်းတမှီဝဲရနိုင်တယ်လို့မဆိုအခြားနိုင်ငံခြားပစ္စည်းအပိုင်းပိုင်းရှိကွောငျးသေချာအောင်ချင်တယ်။ အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုမှာတစ်ဦး carburetor တပ်ဆင်သည့်အခါမျှမလေထုပေါက်ကြားရှိလိမ့်မည်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦး gasket သို့မဟုတ်လျောက်ပတ်ပတ်လည်မှာနည်းနည်းလေးလေကြောင်းယိုစိမ့်ညံ့ဖျင်းအလုပ်လုပ်မ carburetor ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သငျသညျအစဉျအမွဲအထဲတွင်တစ်ဦးအလွန်သေးငယ်သော pin ကိုဖောက်ရာနဲ့ကောက်ရိုးမှတဆင့်ဆိုဒါစို့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးသလား အသေးဆုံးလေကြောင်းယိုစိမ့်သည့် carburetor အတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းလောင်စာ / လေထုအရောအနှောများမှန်ကန်သောစည်းမျဉ်းကိုချွတ်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏အချိန် ယူ. ထိုအခွင့်ကိုလုပ်ပါ။ ဘယ်အချိန်မှာလိုအပ်သော, သင်တို့ရှိသမျှသည်သင့်လျော်သောအဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့် gaskets အသုံးပြုနေသည်သေချာအောင်ဖို့ပေါက်ကွဲပုံဆွဲကိုးကားပါ။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုသူတို့သင် carburetor ညှိတက်ကိရိယာအစုံကနေအသစ်အစိတျအပိုငျးမြားနှငျ့အစားထိုးကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လျှင်ကျန်အစိတ်အပိုင်းများကိုအတူတက်လေချင်ဘယ်မှာသူတို့အားစီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါ Carburetor ၏ထိပ်တန်းတစ်ဝက်စည်းဝေး
high-speed ကို nozzle အတွက်ဝက်အူနဲ့သူဌေးက gasket အပေါ်ချော်။ မှတ်ချက်: အောက်ကဓါတ်ပုံတွေမှာပြထားတဲ့အနီရောင်ထုပ်ပိုးအဝတ်လျှော်မှန်ကန်သောမဟုတ်ပါဘူး။ သူဌေးက gasket, ထူ spongy နှင့်အရောင်အတွက် tan ဖြစ်ပါတယ်။
ကတော့ float အဆို့ရှင်ပရိသတ်၌ဝက်အူ။ အသစ်က float အပ်ထည့်ပါနှင့်ဆေးထိုးအပ်နွေဦး attach ။ အဟောင်းကတော့ float အပ်အသစ်များကိုတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ရာဘာအစွန်အဖျားရှိသည်နှင့်ကပ်ထဲကနေကိုစောင့်ရှောက်ရန်နွေဦးလိုအပ်နေတဲ့နွေဦးရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါအသစ်အဟောင်းကတော့ float အဆို့ရှင်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်၏ရုပ်ပုံလွှာ။ အဟောင်းအပ်ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပ်နွေဦးအပေါ် clip ရန်မရော်ဘာအစွန်အဖျားသို့မဟုတ်နေရာရှိပါတယ်။ အဆိုပါ float နွေဦးထို့ကြောင့်အပ်နွေဦးကချွတ်သို့မဟုတ် (ငါပြုသကဲ့သို့) က install လုပ်ဖို့မေ့လျော့ဖို့သတိထားပါဖြစ်အလွန်အမင်းအရေးကြီးသည်။ အသစ်က float နှင့် float ပတ္တာ pin ကို Install လုပ်ပါ။ ကတော့ float ပတ္တာဖို့ကတော့ float အပ်နွေဦး clip ။
high-speed nozzle အစားထိုးမည်
Valve ညီလာခံ float
Kit ကနေနယူး Float Valve
Float Valve အစားထိုးမည်
Float Valve ညီလာခံအစားထိုးမည်
နယူး Float Valve Clip
ကတော့ float ပတ္တာဖို့ကတော့ float အပ်နွေဦး clip ။
အဆိုပါ Bottom တစ်ဝက်ပြင်ဆင်ပါ အဆိုပါ Carburetor ၏
တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်းသုံးပြီးညင်ညင်သာသာရှိရာက high-speed ကို nozzle ၏အခြေစိုက်စခန်းတွင်းကနေမဆို burrs ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ တစ်ဦးလေကြောင်းရေပိုက်တွေနဲ့သတ္တု bits သည်များအတွက်မဆိုမြေမှုန့်ထဲကအမှုတ်ရန်သေချာစေပါ။ ဤသည်သူဌေးက gasket နှင့်အတူတစ်ဦးလေကြောင်းတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖန်ခွက်ကိုလောင်စာ filter ကို Reassemble ။ ရော်ဘာ gasket ဖန်ခွက်ပန်းကန်နှင့်အတူတစ်ဦးလေကြောင်းတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်အရပ်၌ရှိကြောင်းသေချာပါစေ။
Filter ကိုမျက်နှာပြင် Gasket အစားထိုးမည်
ဗိုင်းရပ်စ်မရှိအောင်ရှင်းလင်းပြီးပါပြီ Filter ကို Screen ကိုအစားထိုးပါ
Filter ကို Bowl အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုအစားထိုး
ယင်းထိပ်တန်းနှင့်အောက်တစ်ဝက်ပူးတွဲ အဆိုပါ Carburetor ၏
အဆိုပါ gasket တွင်းအတူတက်စီတန်းကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သူတို့ snug ဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့် screw နှစ်ခုတင်းကျပ်ပေမယ့်တင်းကျပ်ကျော်မှဖို့သတိထားပါဖြစ်လိမ့်မည်။ နှစ်ခုရှက်အညီအမျှအတူတူဖိနေကြတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးကြယ်ပွင့်ပုံစံအတွက် screw နှစ်ခုတင်းကျပ်။
Carburetor ခန္ဓာကိုယ်၏ထိပ်တန်းနှင့်အောက်တစ်ဝက်ကို Join
မြင့်မားခြင်းနှင့်နှေးကွေးသောမြန်နှုန်းအပ်တွင်းထဲသို့နှစ်ခုအနီထုပ်ပိုးအဝတ်လျှော်ထည့်ပါ။ အဆိုပါထုပ်ပိုးခွံမာသီးတင်းကျပ်နေသည်နှင့်အမျှဤအဝတ်လျှော်မြင့်နှင့်နှေးကွေးသောမြန်နှုန်းတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်န်းကျင်တစ်ခုလေကြောင်းတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ချိန်ညှိကိုင်ထားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကဤသူကိုဆေးထိုးအပ်အဘို့အလိုအပျသောပွတ်တိုက်မှုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ယခုအဘို့, သာထုပ်ပိုးခွံမာသီးထဲမှာဝက်အူရန်သင့်လက်ချောင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ကြာကြာထုပ်ပိုးခွံမာသီးထိပ်ပေါ်မှာတတ်၏။ ရှေ့ဆက်သွားနှင့်အောက်ပိုင်းထုပ်ပိုးခွံမာသီးတင်းကျပ်ပေမယ့်အထက်ပိုင်းကိုပြန်ပေါ်မကျြနှာကိုပန်းကန်ထားရန်ဖယ်ရှားခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ယင်းစားသုံးမှုထူးထူးအပြားပြားဖို့ Carburetor နှင့်တောင်ပေါ်မှာပြင်ဆင်ပါ
တနည်းကား, လေပေါက်ကြားကာကွယ်တားဆီးဖို့အလွန်အမင်းအရေးကြီးသည်။ သင်က carburetor ယင်းစားသုံးမှုထူးထူးအပြားပြားမှ flush မိတ်ခွင့်ပြုပါရန်ပိုလျှံ gasket ကိုချုံ့သင့်ပါတယ်။ မဆိုမြင့်တက်ခြင်းနှင့် burrs ချ file ဖို့ဖိုင်တစ်ခုကိုသုံးပါ။ သင်တို့ရှိသမျှသည်လမ်းတဝိုက်ရှင်းလင်းသောသတ္တုတွေ့နိုင်ပါသည်အခါ, သင်မပိုမြင့်မားတဲ့အစက်အပြောက်များသိကြ၏။ မည်သည့်အမှုန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လေကြောင်းရေပိုက်နှင့်အတူထွက်မှုတ်ရန်သေချာစေပါ။ တူညီသောကိရိယာအစုံပိုကြီး carburetors အတွက်အသုံးပြုစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် carb ကိရိယာအစုံကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား gaskets နှင့်တကွကြွလာ။ သငျသညျမှန်ကန်သောအရွယ်အစား gaskets ရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒုတိယ gasket အင်ဂျင်အပူကနေ carburetor သီးခြားထားကူညီပေးသည်။
ယင်းစားသုံးမှုထူးထူးအပြားပြားပေါ်နှစ်ခု gaskets ချထားပါ။ သင့်ရဲ့လက်ချောင်းသုံးပါနှင့်တစ်ခုလုံတံဆိပျကိုအာမခံထားအချို့အမဲဆီနှင့်အတူဤအ gaskets ချောဆီ။ သငျသညျမှန်ကန်သောအရွယ်အစား gaskets ရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒုတိယ gasket အင်ဂျင်အပူကနေ carburetor သီးခြားထားကူညီပေးသည်။ နှစ်ခုအခွံမာသီးတင်းကျပ်ရန်7/ 16 လိမ်ဖဲ့ခြင်းကိုသုံးပါ။ ဤရွေ့ကားအခွံမာသီး snug ခံရဖို့မလိုအပ်ပေမယ့်တင်းကျပ်ကျော်မှဖို့မသေချာပါစေ။
ထူးထူးအပြားပြားပေါ်နှစ်ခု gaskets ချထားပါ။
ထူးထူးအပြားပြားမှပြီးဆုံး Carburetor ပူးတွဲ
ယင်းအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာချိတ်ဆက်အစားထိုးပါ။ ယင်းချိတ်ဆက်၏ပြားချပ်ချပ်အစိတ်အပိုင်းအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ post ကိုနှင့်အချိန်ကိုက်ကြိုတင်လက်မောင်းများ၏ပြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆန့်ကျင်သွားသတိပြုပါ။ ယင်းချိတ်ဆက်မျှမကစားရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်တင်းကျပ်ကျော်မှဖို့သတိထားပါဖြစ်နိုင်အောင် screw နှစ်ခုတင်းကျပ်။
ဘီးရုံ "start" အမှတ်အသားမှာအချိန်ကိုက်ကြိုတင်အခြေစိုက်စခန်းမထိဖို့အစပြုနိုင်အောင်တစ်5/ 16 လိမ်ဖဲ့ခြင်းအသုံးပြုခြင်း, အချိန်ကိုက်အခြေစိုက်စခန်းညှိ။ ယင်းအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာအဆင့်မြင့်လှည့်သောအခါထိုအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာချိတ်ဆက်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကျယ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်ရရှိထားသူနိုင်အောင်, အချိန်ကိုက်ကြိုတင်အခြေစိုက်စခန်း၏အခြားအဆုံး adjust ။
နှေးကွေးမြန်နှုန်းအပ် Remove နှင့်ခွံမာသီးထုပ်ပိုး။ လေငြိမ်ဝပ်စွာနေအစားထိုးပါ။
နှေးကွေးမြန်နှုန်းဂျက်များအတွက်ထုပ်ပိုးခွံမာသီးဖယ်ရှားပါ။ က4mounting screw နှစ်ခုရဲ့အတူလေထုငြိမ်ဝပ်စွာနေအစားထိုးပါ။ နှေးကွေးမြန်နှုန်းထုပ်ပိုးခွံမာသီးများနှင့်ဆေးထိုးအပ်အစားထိုးလိုက်ပါ။ အခုဆိုရင်သင်အပ်ဆန့်ကျင်ထုပ်ပိုးအဝတ်လျှော် snug ဖို့ထုပ်ပိုးခွံမာသီးတင်းကျပ်နိုင်ပါတယ်။ တင်းကျပ်ကျော်မှဖို့မသေချာပါစေ။ အဆိုပါနှေးကွေးမြန်နှုန်းအပ်သင့်ရဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ဒါပေမယ့်ညှိနှိုင်းမှုကိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပွတ်တိုက်မှုနှင့်အတူလှည့်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင့်ရဲ့လက်ချောင်းအသုံးပြုခြင်း, 1.5 ညှိနှိုင်းမှုများအတွက် Starting Point သို့အဖြစ်လှည့်ထွက် back ထို့နောက် snug နှင့်သည်အထိအတွက်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ဝက်အူ။ မျက်နှာကိုပန်းကန်, နင်စေခလုတ်ကိုနှင့်နှေးကွေးခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ဘူးသီးအစားထိုးပါ။
သင့်ရဲ့ carburetor ယခုပြန်အတူတကွနှင့်အကြံပေးအဖွဲ့စမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအမြင့်နှင့်အနှေးအမြန်အပ် Valve ချိန်ညှိ
တစ်ဦးတင့်ကားအတွင်းရှိ carburetor ချိန်ညှိပွင့်လင်းရေညှိကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျအထဲကရေတစ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတစ်ချိန်ကသင်တစ်ဦးအကြံပေးအဖွဲ့အတွက်ကနဦး setting များကိုပြီးတော့ဒဏ်ငွေညှိ settings ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုင်သည်အထိအောက်ခြေ (မြန်နှုန်းမြင့်) ဆေးထိုးအပ်ထဲမှာဝက်အူပြီးတော့ 1 အလှည့်ထွက် back ။
ထိုင်ပြီးတော့ 1.5 လှည့်ထွက် back သည်အထိထိပ် (နှေးကွေးမြန်နှုန်း) ဆေးထိုးအပ်ထဲမှာဝက်အူ။
(High Speed) အပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာအထိကြာ, အင်ဂျင် (ကတော်တော်ကြမ်းတမ်း run ပါလိမ့်မယ်), ရှေ့ဆက်ဂီယာသို့ပြောင်းလဲရန်စတင်ပါ။ အင်ဂျင်အောက်ခြေမြန်နှုန်းမြင့်ဆေးထိုးအပ်အဆို့ရှင်အတွက်လှည့် start, အလှည့်အကြားတုံ့ပြန်ရန်အဘို့အ 1 / 8 အလှည့်၏အစိတ်အပိုင်းများများတွင်စောင့်ဆိုင်း။ အင်ဂျင်မှထွက်သေဆုံးသို့မဟုတ် (တစ်ဦးပျော့ backfire တူသောအသံ) ကျောတံတွေးထွေးရန်စတင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်စေသော်လည်းသင်တစ်ဦးပွိုင့်ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ပြန်ဆေးထိုးအပ်အဆို့ရှင် 1 /4အလှည့်ထွက်။ ကြောင်း 1 /4အလှည့်အတွင်း, သင် smoothest setting ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
(အနိမျ့မြန်နှုန်း) ချကပဲလည်ပတ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်မှာမှအင်ဂျင်နှေး။ ကြားနေသို့ Shift ။ နောက်တဖန် 1 / 8 ၏အစိတ်အပိုင်းများ၌ထိပ်အပ်အဆို့ရှင်ကိုဖွင့်ဖို့စတင်ပြန်သွားလေ၏။ တုံ့ပြန်ရန်အင်ဂျင်များအတွက်စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။ သငျသညျအတွက်အဆို့ရှင်ကိုဖွင့်သကဲ့သို့, rpms တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်ပဲပြေးနေဖို့ရာအရပ်မှပြန် rpms လျှော့ချ။ နောက်ဆုံးမှာတော့သင်အင်ဂျင်မှထွက်သေဖို့ဒါမှမဟုတ်နောက်ကျောတံတွေးထွေးပါလိမ့်မယ်လိုလားရှိရာအမှတ်ထိမှန်ပါလိမ့်မယ်။ တနည်းကား,, အဲဒီအချက်မှာပြန်အဆို့ရှင် 1 /4အလှည့်ထွက်။ ကြောင်း 1 /4အလှည့်အတွင်း, သင် smoothest နှေးကွေးမြန်နှုန်း setting ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအထကျချိန်ညှိလက်စသတ်သောအခါ, သင်, ကိုဖယ်ရှားသန့်ရှင်းတဲ့, နှင့်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအဆိုပါ carburetor ပြန်ဆောက်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုမည်သည့်ကိစ္စရပ်အတွက်တက်ထိုင်လျက်ကနေ carburetor ပြင်ပမှ / သွားဖုံးမဟုတ်လျှင်နောက်တဖန်သူတို့ကိုရွှေ့ဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိရပါလိမ့်မယ်။
21 နာရီ 17 မိနစ်အကြာက